“Way adag tahay in sharraxaad laga bixiyo qiimaha Harry Maguire” – – Gool FM
(England) 18 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda Wolves ee Diogo Jota ayaa soo jeediyey in kabtan Conor Coady uusan ku bedelan doonin qiimaha 80-ka milyan ee gini oo laga bixiyey Harry Maguire.
Xiddiga reer Portugal ayaa taageeray tayada saaxiibkiis ay isku kooxda yihiin ka hor kulanka Naadiga Manchester United ay booqaneyso ay berri oo Isniin ah soo booqanayso garoonka Molineux.
Maguire ayaa ka caawiyey kooxdiisa Man United kulankoodii furitaanka horyaalka oo ay 4-0 uga adkaadeen Chelsea inay garoonka ka baxaan iyadoo aan gool laga dhalin oo uu shabaqoodu nadiif yahay tan iyo bishii Febraayo kaddib markii uu noqday daafaca ugu qaalisan adduunka markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda Leicester horraantii bishaan.
Dhanka kale daafaca dhexe ee Coady ayaa laf dhabar u ahaa kororka kooxda Wolves ee ka soo laabatay Sky Bet Championship una soo gudbay Europa League, in kastoo rikoorka daafaca ugu qaalisan dunida uu jabiyey Maguire, balse Jota ayaa garab istaagay kabtankiisa.
Markii la weydiiyay inuu Maguire ku badali lahaa Coady ama mid kasta oo ka mid ah difaacyada Wolves, Jota ayaa yiri: “Taasi waa su’aal! Waxaan qabaa Harry Maguire inuu leeyahay tayo aad u badan, laakiin waan ogahay ciyaartoyda aan ku haysano kooxdeenna, waana aaminsanahay.”
Xiddiga xulka qaranka England ee Maguire waa mid ka mid ah saddex saxiix oo ay Man United sameysay xagaagan isagoo raacaya Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka, iyadoo wiilasha Ole Gunnar Solskjaer ay u muuqdaan inay horumar ka sameynayaan xilli ciyaareedkii ugu xumaa ee 2018/19.
Jota oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray: “Waa 80 milyan oo gini lacagta, waana ay adag tahay in sharraxaad laga bixiyo, suuqa haatan waa mid aan la rumeysan karin fikrad ahaanteyda, laakiin waxba aniga ilama ahan, waxay la xiriirtaa naadiyada, waana daqiiqada aan ku nool nahay, waa inaan qadarinnaa lacagtaas.”
“Waa xilli ciyaareed cusub, Solskjaer wuxuu helay waqti badan oo uu kula shaqeeyo ciyaartoydiisa, wuxuu sameeyay isbadalkiisa”.
“Suuqa kala iibsiga waxay isku dayeen inay horumariyaan kooxdooda, sidaas darteed waan ognahay inay nagu adkaan doonto, waana inaan fahamnaa inaan wajihi doonno koox aad u wayn.”
Jota ayaa shabaqa soo taabtay labadii kulan ee Wolves ay Man United kaga badiyeen gurigooda xilli ciyaareedkii hore markii ay ka tuureen tareenka FA Cup-ka kaliya isbuucyo ka hor guushii 2-1 ee ay ka gaareen horyaalka.
Kooxda Macalin Nuno Espirito Santo ayaa ku dhammeysatay kaalinta 7-aad, waxayna sagaal dhibcood ka dambeeyeen kooxda kaalinta lixaad ku dhammaysatay ee Man United xilli ciyaareedkii hore, waxaana ay Wolves u soo baxday isreeb-reebka tartan Yurub ah markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1980-kii.